सरकारले हप्तामा दुई दिन बिदा दिने निर्णय के हुँदैछ ? « Ok Janata Newsportal
सरकारले हप्तामा दुई दिन बिदा दिने निर्णय के हुँदैछ ?
काठमाडौं । सरकारी कर्मचारीलाई हप्तामा दुई दिन बिदा दिने निर्णय तत्काल कार्यान्वयनमा नआउने देखिएको छ ।
तत्कालीन पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले जोडतोडका साथ उठाएको दुई दिन बिदाको विषयको कार्यान्वयन नै अन्योल बनेको छ । कोभिड–१९ ले सबैभन्दा बढी प्रभावित बनेको पर्यटन क्षेत्र उकास्न प्रस्ताव गरिएको दुई दिन बिदाको विषय अन्योल बनेको हो ।
दुई दिन बिदा अध्ययन गर्न बनेको समितिले नै विगतमा प्रकाशित कागज तथा दस्तावेजको अध्ययन, पर्यटन सेवा प्रवाह, ट्राफिक व्यवस्थापन तथा सरकारी खर्च सम्बन्धमा दुई दिने बिदाले पार्ने प्रभावबारे सरोकारवालासँग समेत छलफल गरेको थियो ।
विज्ञहरुको राय, उद्योगी, ट्रेड युनियनसँगको छलफलको निष्कर्षलाई समेत अध्ययनको विधिमा राखिएको थियो ।
तर अहिले सरोकारवालासँग नै छलफल गरेर ल्याएको प्रतिवेदनमाथि रायका लागि खुला गरिएको छ । दुई दिन बिदा दिने कि नदिने भन्ने विषयको प्रतिक्रियाका लागि मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखिएको पर्यटन सचिव यादवप्रसाद कोइरालाले बताएका छन् ।
पर्यटन सचिव कोइरालाका अनुसार सबै तह र तप्काबाट प्र्रतिक्रिया आएपछि मात्र त्यसका आधारमा मन्त्रालयले एउटा धारणा बनाउनेछ । कोइराला भन्छन्, ‘दुई दिन बिदाको जटिलता तथा सहजता र पहिले नै लागू भएको यो विषयमा अध्ययन गर्नुपर्यो ।
जनताको माग के छ, त्यो पनि हेर्नुपर्यो । यदि बहुसङ्ख्यकबाट दुई दिन बिदा दिनुपर्छ भन्ने प्रतिक्रिया आयो भने सोहीअनुसार मन्त्रालयले प्रस्ताव क्याबिनेटमा लैजाने छ, होइन भने यहीँ रोक्नेछ ।’
यता अध्ययन समितिकै एक सदस्य पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत धनञ्जय रेग्मी आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि पुनः यस एजेन्डालाई बोकेर अघि बढ्ने बताउँछन्, रेग्मीले भने, ‘हामीले मन्त्री फेरिएपछि उहाँलाई पनि स्मरण गराइसकेका छौँ । सातामा दुई दिन बिदाको एजेन्डा पुनः बोक्छौँ ।’
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा साताको दुई दिन बिदा सफल भएको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको महासन्धि ४७ ले हप्तामा ४० घण्टा कामको व्यवस्था गरेको छ ।
यसका लागि धेरैजसो मुलुकले सातामा पाँच दिनलाई ‘वर्किङ डे’का रूपमा प्रयोग गर्दै आएका छन् । तर त्यही ४० घण्टाको कामलाई नेपालमा हप्तामा ६ दिन खर्चिइन्छ ।